Banyere Anyị - Pingxiang JinPing ezimezi oku Manufacturing Co., LTD
2 ″ usoro ngosi shei
2.5 ″ usoro ngosi shei
3 ″ usoro ngosi shei
4 ″ usoro ngosi shei
5 ″ usoro ngosi shei
6 ″ usoro ngosi shei
8 ″ usoro ngosi shei
Ọdịdị ndị Japan
4 ″ usoro Japanese style shei
5 ″ usoro Japanese style shei
6 ″ usoro Japanese style shei
8 ″ usoro Japanese style shei
2 ″ usoro cylinder shei
3 ″ usoro cylinder shei
4 ″ usoro cylinder shei
Fan ekara achicha
W ekara achicha
1 ″ 8s kandụl
1.2 ″ 8s kandụl
1.5 ″ 8s kandụl
1,9 ″ 8s kandụl
2 ″ 8s kandụl
2.5 ″ 6s kandụl
Single shot kandụl
1.2 ″ otu kandụl kandụl
1.5 ″ otu kandụl kandụl
2 ″ otu oriọna kandụl
2.5 ″ otu oriọna kandụl
Wheel na Waterfall
Isi iyi 1.4G
Assortment ezimezi oku
Ezimezi oku ngwa
Igbu oge fuuz
Pingxiang JinPing ezimezi oku Manufacturing Co., LTD
Onye buuru Pingxiang Jinping Fireworks Manufacturing Co., Ltd bụ onye "Tongmu Export Fireworks Factory" guzobere na 1968. onglọ ọrụ Tongmu na-ebupụ Fireworks malitere azụmahịa ya site na ogbako, na mgbe ihe karịrị afọ 50 nke mmepe na-aga n'ihu, o jiri nwayọọ nwayọọ mepụtara. n'ime a maara nke ọma ezimezi oku rụpụta, nke bụ otu n'ime ndị kasị ibu exporting ezimezi oku suppliers na China.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụlọ ọrụ erutela karịa 666,666 m2. Dị ka ihe magburu onwe enterprise na mmepụta nke ezimezi oku na China, ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 600 ọrụ, gụnyere ihe karịrị 30 technicians.
Plọ ọrụ azụmahịa Ọnọdụ
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịnye ihe karịrị ụdị ọkụ ọkụ 3,000: shells ngosi, achicha, oku oku, kandụl roman, shells mgbochi Rome wdg. South-East Asia, Africa, na Middle East. The ahịa nwere afọ ojuju na anyị ezimezi oku ngwaahịa, n'ihi na nke dị iche iche na-adọrọ adọrọ mmetụta, asọmpi price na mụ elu mma.
Taa ， na ihe karịrị 666,666 m2 nke mmepụta mpaghara, na ihe karịrị ndị ọrụ 600, gụnyere ihe karịrị ndị ọkachamara 30, ụlọ ọrụ ahụ etolitewo n'otu n'ime ihe ọkụkụ kachasị ukwuu na nke kachasị elu na China. Ndị ọkachamara na ndị ọrụ dị irè na-enye ndị ahịa anyị ọrụ kachasị mma n'ụwa niile.
Ebe a na-emepụta ihe
AHRERW AKW PRKWỌ
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị otu ọrụ ọgbụgba ọkụ, yana ihe karịrị ndị ọkachamara 30, gụnyere gụnyere ndị injinia 4 dị elu na ndị injinia 6 dị n'etiti. Ihe karịrị 100 ọhụrụ ngwaahịa na-mepụtara kwa afọ.
N'otu oge, ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ emeriwo ọtụtụ oku eji eme ihe si mba ofesi na-egosi onyinye, ọ bụkwa ndị a họpụtara ka ha butere ezimezi oku maka emume National Day na New Year na United States, Japan, France, Spain, Italy.
IHE DIG MMA
Na December 2001, e eze renamed "Pingxiang Jinping ezimezi oku Manufacturing Co., Ltd.".
Nara onyinye nturu ugo nke Mayor na Shangli County na 2017 na onyinye Pingxiang Mayor nke di na 2018.
Na 2019, ụlọ ọrụ ahụ kwụrụ ihe karịrị yuan 17 nde na ụtụ isi, na ịkwụ ụgwọ ụtụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ karịrị 100 yuan.
Ulo oru nke ulo oru ahu na usoro njikwa mma di na ndi isi n’oru oru
Adreesị:MaLing, TongMu Town, Shangli County, Pingxiang City, Jiangxi Province, China
Ekwentị:0086-791-86496682 / 86392558
E-mail ahịa @ brightpy. com